Sunday, 22 May 2011 23:59 ဒေါက်တာခင်မောင်ညို စာရေးဆရာတွေကတော့ စာ ရွက်တွေပေါ်ကနေ ပြောချင်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့်လဲမသိဘူး။ မြန်မာဖြစ်နေလို့ထင်ပါရဲ့ အား လည်းနာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘာကိုလုပ် လုပ်ပါ။ ရည်ရွယ်ချက်တော့ ရှိရပါ တယ်။ ဥပမာ ဒီမိုကရေစီလမ်း ကြောင်းကို သွားတယ်ဆိုပါတော့ ပြည်သူတွေအတွက် အစစအရာရာ အဆင်ပြေရေးအတွက် ရည်ရွယ် ကြမှာဖြစ်တယ်။ ဒီအတိုင်းပဲပေါ့၊ Good Governance နဲ့ Clean သစ်ထူးလွင်
Saibal Dasgupta, PTI | May 28, 2011, 06.56am IST
Chinese PLA Navy warships visit Myanmar Yangon's Thilawa Port BEIJING: Myanmar's president Thein Sein,aformer military general, is in Beijing discussingaplan to allow the Chinese navy to dock in Myanmar ports and get direct access to the Bay of Bengal and the Indian Ocean. Thein Sein will have to consider New Delhi's apprehensions about China's naval expansion in its neighbourhood before acceding to Beijing's request, sources said. သစ်ထူးလွင်
5/28/2011 09:34:00 AM
US senator John McCain to visit Myanmar, sources say
May 27, 2011, 12:03 GMT
Yangon - US senator John McCain, the Republican's unsuccessful presidential candidate in 2008, has been grantedavisa to visit Myanmar next week, government sources said Friday. 'He will visit here in the first week of June,' saidagovernment official who requested anonymity. McCain is expected to meet with opposition leader Aung San Suu Kyi, but it was unclear whether he would be granted an audience with President Thein Sein or senior government officials, the source said. The senator,adecorated Vietnam War veteran, has been one of the foremost critics of Myanmar's military junta that ruled the country from 1988 to 2010, before passing power to an elected government afterageneral election in November. The election, labelledasham by US President Barack Obama, was won by the pro-military Union Solidarity and Development Party. သစ်ထူးလွင်
5/28/2011 09:23:00 AM
လင်းသန့် Friday, 27 May 2011 18:10 ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို မျက်ကွယ်ပြုခြင်းသည် ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုချေဖျက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီမဆန်ဘဲ တိုင်းပြည် ၏ သမိုင်းအတွက် သိက္ခာကျစေသောလုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောကြားလိုက်သည်။ ယနေ့ အခမ်းအနားတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်(ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD)ရုံးချုပ်တွင် ယနေ့ကျင်းပသော၂၁ နှစ်မြောက် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအောင်ပွဲနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ယင်းသို့ ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“နိုင်ငံတနိုင်ငံ ဂုဏ်သိက္ခာရှိဖို့ဆိုတာက ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုလေးစားရမယ်။ ပြည်သူကို မလှည့်ဖျားရဘူး၊ အခုစကား တမျိုး ပြော၊ နောက် စကားတမျိုးပြော လုပ်လို့မရဘူး၊ ၉၀ ရလဒ် အသိအမှတ်မပြုတာကို ကျမတို့က အမြဲကန့်ကွက်တယ်။ NLD ကို အာဏာမပေးလို့ မဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူလူထုကို သစ်ထူးလွင်
5/27/2011 06:43:00 PM
ထိုပွဲသို့ NLD အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒုဥက္ကဌ ဦးတင်ဦးနှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှူဆောင်များလည်း တက်ရောက်ကြပြီး မကြာမီက လွတ်မြောက်လာသည့် နိုင်ငံရေး သစ်ထူးလွင်
5/27/2011 06:41:00 PM
‘ဆိုင်းဇီ နံပါတ်တစ်ကြီး ဖြစ်ချင်နေတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အခုရထားတဲ့ ပရိသတ်အားပေးမှုနဲ့ပဲ ကျေနပ်ပါတယ်’၊ Lဆိုင်းဇီနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Thursday, 26 May 2011 14:43 ‘မောင်တို့ချယ်ရီမြေ’ တေးစီးရီးထွက်ရှိစဉ်အခါက ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အသံအေးအေးလေးနဲ့ ပရိသတ် သတိထားမိစေခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသူလေး တစ်ယောက်လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ကချင်တိုင်းရင်းသူလေး Lဆိုင်းဇီဆိုတာ သိကြပြီးဖြစ်မှာပါ။ အဲဒီအခွေထဲက ‘လှည့်ကြည့်ပါဦး’ သီချင်းလေးက ပရိသတ်အများစုရဲ့ ရင်ထဲကို ထိုးဖောက်သွားပြီးနောက်မှာ ‘မိုးရာသီထဲ’သီချင်းနဲ့ Lဆိုင်းဇီက နောက်ထပ်မှတ်တိုင်တစ်ခု ထပ်စိုက်နိုင်ခဲ့သလို ဗီဒီယိုနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတချို့ မှာလည်း ပီပြင်သော သရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ပုံဖော်ပြနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီတော့သူပြောပြတဲ့ သူ့ရဲ့ လတ်တလော အနုပညာရေးရာ အထွေထွေ၊ ပရိသတ်နဲ့ သူ့ကြားက သဘောထား၊ ခဏတာ ကင်းကွာသွားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မေးဖြစ်ခဲ့ရာမှာတော့ အခုလိုဖြေကြားလာခဲ့ပါတယ် . . .
မေး - ပြည်ပရှိုးပွဲရောသွားဖို့ ရှိလား။
ဖြေ - စက်တင်ဘာလမှာ ဥရောပဘက်ကို တစ်လလုံး ဖျော်ဖြေရေး သွားဖို့ရှိတယ်။ အမေရိကား ဖျော်ဖြေရေး ကို တစ်လလုံးသွားထားခဲ့တော့ ပရိသတ်နဲ့က နည်းနည်း အဆက်ပြတ်သလို ဖြစ်သွားတယ်လေ။ ဒါကြောင့် လောလောဆယ် ဆိုင်းဇီပရိသတ်တွေ အတွက် အချိန်ပေးဦးမှာပါ။
မေး - ဗီစီဒီပိုင်းကို စနေပြီဆိုတော့ ဗီစီဒီဖန်တီးမှုအပိုင်းမှာ ဆိုင်းဇီစိတ်ကြိုက် လုပ်ဖြစ်လား။
၀တ်မှုန်ရွှေရည် နှင့် တေဇ သား ချစ်သူတွေဖြစ်နေပြီလား သူတို့ စုံတွဲဓါတ်ပုံတွေ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပြန့်နှံနေ
မင်းသမီး ၀တ်မှုန်ရွှေရည် တယောက်အခုတလော စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင် တေဇ သား နဲ့ တွဲနေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ထွက်လာပါတယ်။ ၀တ်မှုန်ရွှေရည် ဟာ အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ရဲ့ ရည်းစား လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ တက်သစ်စ အချိန်တုန်းကတော့ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ မြေး ဖိုးလပြည့် နဲ့ မေမြို့ ကို ပါသွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ထွက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
5/27/2011 08:55:00 AM
သန်းကောင်ယံမှာထွက်တဲ့- နေ- Midnight Sun ရှိရာ အရပ်သို့ အလည်တခေါက်
၂၇၀၅၁၁ (ထက်အောင်ကျော်) သန်းကောင်ယံမှာ နေ- ထွက်တယ်ဆိုတာ တကယ်လား
ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက် ထိုင်းခရီးစဉ်အတွင်း ထိုင်းနဲ့မြန်မာမိတ်ဆွေအတော်များများက ကျနော်ကို အဲ ဒီမေးခွန်းမေးကြပါတယ်။ မြန်မာမိတ်ဆွေတွေဆိုတာကတော့ ဒုက္ဒသည်စခန်းတွင်းက ကျနော်တို့ ရဲဘော်တချို့ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပီး စကင်ဒီနေဗီးယန်း နဲ့ နော်ဒစ် Scandinavia & Nordic (နော်ဝေး။ ဆွီဒင်။ သစ်ထူးလွင်
မြန်မာပြည် ကို တင်သွင်းနေတဲ့ တရုပ်လုပ်ဆိုင်ကယ်တွေပါ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ဓါတ်ပုံပန်းချီ ပြပွဲဖွင့်လှစ်
Monday, 23 May 2011 20:46 Written by info.NLD
အခြေခံပညာကျောင်း အများစုတွင် ကျောင်းအပ်လက်ခံနေပြီး စေတနာအလျောက် လှူဒါန်းခြင်းမှလွဲ၍ မည်သည့်အလှူငွေမှ ကောက်ခံခြင်းပြုမည် မဟုတ်ကြောင်းဆို
Wednesday, 25 May 2011 14:23 အခြေခံပညာကျောင်း အများစုတွင် ကျောင်းသားဟောင်းများ ကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်းကို မေလဆန်းမှ စတင်ကာပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ကျောင်းသားသစ်များ လက်ခံခြင်း ကိုမူ မေလ၏ သီတင်းနောက်ဆုံးပတ် ဖြစ်သည့် ၂၅ ရက်မှ ၃၁ ရက် နေ့အတွင်း သစ်ထူးလွင်
ကနဦး ပေးသွင်းခ ငွေကျပ်သုံးသိန်းနှုန်းဖြင့် ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများ ချထားပေးရန်ရှိ
Wednesday, 25 May 2011 12:15
ယခုနှစ်အတွင်း စတင်ချထားပေးမည့် GSM ဖုန်းများကို ကနဦး ပေးသွင်းခ ငွေကျပ် သုံးသိန်း ၀န်းကျင်ဖြင့် ချထားပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ် ရှိကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းနှင့် နီးစပ်သော အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သိရှိရသည်။